खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएसँगै साधना लघुवित्तको खुद नाफा २९७% बढ्यो
वैशाख १४, काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ३ दशमलव ९ गुणा अर्थात् २९७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
कम्पनीले गत आवको तस्रो त्रैमासमा रू. १ करोड ९० लाख खुद नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू. ७ करोड ५८ लाख पुगेको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो ।
साथै, रू. २ करोड ६० लाखभन्दा बढी खराब कर्जा उठाउन कम्पनी व्यवस्थापन सफल भएकाले पनि खुद नाफामा बढ्नमा टेवा पुगेको हो । गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी ११२ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा ६८४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
चुक्तापूँजी रू. २५ करोड ६९ लाख ८० हजार रहेको कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. ९ करोड ४० लाख ९२ हजार जगेडा कोषमा सञ्चित गरेको छ ।
निष्क्रिय कर्जा गत अवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा बढेको छ । गत आवमा निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको वृद्धि भएर २ दशमलव ३३ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यसैगरी, प्रतिशेयर आम्दानी रू.३९ दशमलव ३३ (वार्षिक), मूल्य आम्दानी अनुपात ४१ दशमलव ६९ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १३६ दशमलव ६१ रहेको छ । हालसम्म कम्पनीले देशभरीमा ७६ ओटा शाखा कार्यलयहरुबाट लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।